Barakac hor leh oo ka bilowday magaalada Mandheera | Xaysimo
Home War Barakac hor leh oo ka bilowday magaalada Mandheera
Barakac hor leh oo ka bilowday magaalada Mandheera
Wararka ka imaanaya Magaalada Mandheera ee xadka dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegaya in dad badan ay halkaas ka barakacayaan, kuwaas oo ka cabsi qaba xiisadda maalmahaan dambe ka taagneyd deegaankaasi.
“Sidii aan u joognay ciidan duulaya ayaa ina soo galay, laba ciidan dhexdood ayaa galnay, halkaanna waxa xuduud, caruurtii iskuulada aadayay khatar ayay ku jiraan, nafsadeenna khatar ayay ku jirtaa, waan qaxeynaa sababtoo ah haddii u madfac kugu soo dhaco halkee la aadi,” ayay tiri Haweeney kamid ah dadkii Maanta ka qaxay Mandheera.
Bakaracaan ayaa kusoo aadayo xilli uu jiro Xiisad ka dhaxeyso Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo gudaha u galay Magaalada Mandheera.
Ciidamo ka tirsan Jubaland ayay dadka deegaanka sheegeen in ay ku sugan yihiin qeybo kamid ah Mandheera ee dhanka xuduudka Kenya, inkastoo Jubaland ay arrintaas beenisay.
Inkastoo hadda uusan jirin dagaal socdo, haddana waxaa jiro dhaqdhaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Dowladda, waxaana suurtagal ah in mar kale la is gacan saaro.